कोरिया जान नयाँ मान्यता : भाषा परीक्षा भन्दा सीप परीक्षणको अंक बढी, ईपीएस पासभएपछि फेरि जाँच गरिने - Sabal Post
कोरिया जान नयाँ मान्यता : भाषा परीक्षा भन्दा सीप परीक्षणको अंक बढी, ईपीएस पासभएपछि फेरि जाँच गरिने
रमेश भारती / काठमाडौं – रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत दक्षिण कोरिया रोजगारीमा जाने श्रमिकले भाषाभन्दा सीप परीक्षणको परीक्षा बढी अंकको दिनुपर्ने भएको छ । सन् २०२० का लागि कोरियन भाषा परीक्षामा सहभागि भइ उत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीले सीप परीक्षण धेरै अंकको दिनुपर्ने वैदेशिक रोजगार ईपीएस शाखाले जानकारी दिएको छ । सन् २०२०का लागि कोरिया जान चाहनेले गत हप्ता परीक्षा दिएका थिए । परीक्षाको नतिजा असार १३ गते प्रकाशन हुनेछ ।
कृषि क्षेत्रका लागि परीक्षार्थीले ९० अंकको भाषा परीक्षा दिएका थिए । अब उक्त भाषा परीक्षामा पास भएको खण्डमा १ सय १० अंकको सीप परीक्षणको परीक्षामा सहभागि हुनुपर्ने छ । यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जानका लागि परीक्षार्थीले १ सय अंकको भाषा परीक्षा दिएका छन् । अब उक्त परीक्षा पास भएको खण्डमा सय अंकको सीप परीक्षा अनिवार्य दिनुपर्ने शाखाले जानकारी दिएको छ ।
गत वर्षहरुमा भाषा परीक्षा पास गरेका परीक्षार्थीहरुको सामान्य सीप परीक्षण गरिँदै आएको थियो । तर, अब भने भाषा परीक्षा पास गरेपछि सीप परीक्षण अनिवार्य पास गर्नुपर्ने छ । आगामी वर्ष सन् २०२० का लागि दक्षिण कोरियाले कुल १० हजार ५० जना नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने कोटा निर्धारण गरेको छ । यस परीक्षाबाट उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ७ हजार ५० र कृषि क्षेत्रमा ३ हजार गरी कुल १० हजार ५० जना नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार छनोट गरी लैजान भएको हो । उक्त कोटाका लागि ८४ हजारभन्दा बढी युवाले कोरियन भाषा परीक्षा दिएका छन् ।
कोरियन भाषासँगै सीप परिक्षण पनि अनिवार्य गरिएको शाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद खनालले बताए । विगतका वर्षमा जस्तो कोरियन भाषा पास हुँदै सामान्य सीप परीक्षण गराएर अब कोरियाको रोजगारीमा जाने पाउने अवस्था नभएको प्रमुख खनालले बताए । ‘भाषा उत्तीर्ण भएपनि सीप परीक्षणमा असफल भए रोजगारीका लागि कोरिया जान मिल्दैन’ प्रमुख खनालले भने,‘भाषासँगै सीप परीक्षण पनि उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । कोरियाको मानव सशाधन केन्द्रले भाषालाई भन्दा सीप परीक्षणलाई जोड दिइरहेको छ । भाषा परीक्षा पास भएर रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका कामदारलाई उता पुगेर समस्या नहोस् भनेर सीप परीक्षणलाई प्रथामिकतामा राखिएको हो ।’
भाषा परीक्षा भन्दा सीपको धेरै आवश्यकता हुने उनको भनाइ छ । नेपालबाट भाषा परीक्षा पास भएर गएका श्रमिकमा कोरिया पुगेपछि काम गर्न नजान्न समस्या उत्पन्न हुने गरेको शाखाले जनाएको छ । पछिल्लो समय सीप नभएका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जादाँ कार्यस्थलमा अंगभंग हुने र मृत्युसमेत हुने गरेको छ ।भाषा मात्र अध्ययन गरेर कोरिया पुगेका युवामा पनि यस्तो समस्या देखिएपछि कोरिया सरकारले सीप परीक्षण अनिवार्य गर्ने लागिएको हो ।
पछिल्लो समय कोरियन भाषामार्फत रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको आकर्षण बढ्दो छ । देशमा रोजगारीको अवसर नभएका कारण कोरिया जान चाहेको भाषा परीक्षामा सहभागीहरुले बताएका थिए । बार्षिक १० हजारको हाराहारीमा युवाहरु इपीएसका माध्यमबाट कोरिया पुग्ने गरेका छन् । हाल, कोरियामा ४० हजारभन्दा धेरै नेपाली युवा रोजगारीमा कार्यरत रहेका शाखाले जनाएको छ । सन् २००८ यता ६० हजार युवा कोरियन भाषा उत्तीर्ण गरि रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका छन् । – खबरहब
किन हुन्छ महिलाको मासिक धर्म ? के…
गणतन्त्रको नाममा यो लुटतन्त्र कहिले सम्म ?
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग : आज…
आलम विरुद्धको थुनछेक बहस सकियो, आदेश आजै…
बैंककमा हजारौ यात्रु अलपत्र